Ukulungiselela ikhosi yeArcGIS-Geofumadas
NgoFebruwari, 2010 ArcGIS-ESRI, cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS
Ngaphantsi kweveki, ndiqala ukuziva uxinzelelo lwekhosi ye-ArcGIS, kwalabo abaphuma bezaziyo apho, ukuba uyamkela, awazi xa, kwaye ngokukhawuleza sele usuzinikele.
Liqela labanomdla abangafuni kuxakekisa isoftware engaziwayo, abanemali kunye nethemba lokudibanisa iArcGIS. Okomzuzwana ndifuna ukukunika ezinye iindlela, kodwa kule meko, iArcGIS yeyona ndlela ilungileyo kuwe, ngenxa yeemeko ezininzi, kubandakanya ukubakho kweencwadana kunye nexesha endingenalo ikhosi ende.
Bafuna ukudityaniswa kwenkqubo ye-cadastral, endiyibonayo ibandakanya iifayile ezicocekileyo zokucoca ezomhlaba. Kundinike ukwaneliseka ukwazi ukuba ezi mephu zakhiwa ngumntu owandifundisa iMicrostation kwiminyaka embalwa edlulileyo, kungoko ukungcola abanako kuyimveliso yolondolozo olungenangqondo kunye nokuba msulwa kokungasebenzisi zembali. Oku kuyakwenza kube lula ukwazi ukuba ziphi iinguqu kunye neempazamo ezinokubakho malunga nezobuchwephesha.
Okwangoku, ndibenzele isindululo sokutya, kuba abanalo, kwaye andinaxesha, ngakumbi ukuba kuya kufuneka uhambe iiyure ezimbalwa. Ngeempelaveki ezimbini uqeqesho lweklasi luya kugqitywa, kunye nemisebenzi yeveki kunye nenkxaso yeeveki ezimbini ngokudlula Ingxoxo ye-Gmail.
Ngaphandle koko, kuya kubakho ukwenza amanyathelo amanyathelo okuhamba ngeendlela ze-7 eziqhelekileyo, phakathi kwazo eziye zachongwa:
Ukuhlanganiswa kwedatha yeCAD
Ukudibanisa kwi database
Uhlalutyo kunye nezinye izicwangciso zokucwangcisa
Ukusebenzisana neGoogle Earth
Apho ndiza kukuxelela ukuba ndiqhuba njani, kuba ngoku ndifunile ukuba balungiselele oomatshini kwaye bandithumelele imizekelo yedatha ukuze ihambelane nedatha. Kwaye ukuba konke kuhamba kakuhle, mhlawumbi la manyathelo ngamanyathelo okufundisa kunye neengcebiso zokuxhasa ziya kuphela zilayishwe kule bhlog.
Blog Umhlaba ka-Google
Post edlulileyo«Ngaphambilini Velisa imisele ne ArcGIS
Post Next I-Google ihamba kwi-Facebook kunye ne-TwitterOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-5 "zokulungiselela ikhosi ye-ArcGIS"
UCarlos Google akayi kuluma
Ngokumalunga nemanyuwali, andinayo nayiphi na iArcGIS engakumbi kunaleyo ifunyenwe kwiwebhu. Kwaye ngesikhokelo endisilungiselela umasipala endizokuhamba nawo, xa ndinawo ndiza kube ndibelana ngawo apha, ndiyaqhubeka nenguqu.
Sawubona umhlobo uCarlos.
Ukonwaba ukwazi ukuba esi sithuba sikuncede, sisizathu sebhlog. Isihloko sakho sibanzi, kwaye andikwazanga kukunika iifomula zomlingo kwimpendulo, nangona kunjalo ndiza kukunika ezinye iindlela ezinokuba luncedo.
Ukuba uneelayisensi zentengiso yesoftware, apho kutyalwe imali eninzi, andikukhuthazi ukufudukela kwisoftware yasimahla. Ewe, ukufuduka kukwathetha nolunye ugcinomali.
Kodwa ukuba ubuninzi abutyaliwe, kwaye kukho amandla okutyala imali yoko bekucwangciselwe iilayisensi kunye nophuhliso, i-gvSIG, i-PostGIS, imephu, i-Bender okanye i-qGIS ngamaqonga anolwazi olwaneleyo lokwakha nokupapasha, ngenkxaso ye-Intanethi uluntu oluqhuba ngomiliselo lwalo. Nditsho neVenezuela yindawo apho kukho iimeko ezifanelekileyo zezi njongo.
Malunga nokubandwendwela ... kuya kufuneka ndiyibone ngexesha lam, kodwa ndizithembe ngokubhala kumhleli (e) geofumadas (dot) com imeyile kwaye singathetha ngeendlela endinokukunceda ngazo.
UCarlos Oropeza uthi:
Imibuliso, mhlobo wam, ndingundwendwe olusebenzayo kwiphepha lakho, jonga ixesha langoku sisebenza apha kurhulumente obizwa ngokuba yiLa Caipatal de Venezuela kwiprojekthi ebizwa ngokuba yiLara Digital apho inkqubo yolwazi lobume bezwe lethu yenye yeendlela Iziqwenga ezisisiseko zeprojekthi. Sisebenza ngeArdis 9.1 kunye nokupapashwa kwi-wed phantsi kwe-phantsi apho i-api ebekho kwinethiwekhi isincedile kakhulu, kodwa abantu base-esri basinike isibonakaliso?, Nokuba kunokwenzeka ukuba thina Ndiza kuthumela ngeposi yam iincwadana zamaphepha zekhosi oyenzayo kunye nokuba kunokwenzeka ukuba ube neencwadana ezincinci zeArthuris ezingathanda ukusinceda. Jonga enye into endikuxelele yona kukuba siphonononge isidingo sokufudukela kwisoftware yasimahla, uyayazi indleko zabantu bakwa-Esri kodwa andinaso isikhokelo somntu ondixelela ukuba yeyona nto ibalaseleyo kubugqwirha obuvulekileyo, jonga ndicinga ukuba nguwe Ice cream utata ukutsho umntu olungiselelwe kakhulu kwi-GIS angathanda ukuba undincede kwaye ukuba ufuna ukuthumela isicelo sokundwendwela idolophu yethu. Ndilinde umnikelo wakho kunye noncedo lwakho kule meko, uthi mhle ngendlela elungeleleneyo evela kumhlaba ofudumeleyo waseBarquisimeto-eVenezuela. Undwendwe lwe-geofumada olusebenzayo.
Ndandinomdla kwimigca yakho yokugqibela.
Ukuthi yonke into ihamba kakuhle kwaye ngoko sinokuzimela kwezo zifundo.